June 2020 – WAAQEFFANNAA
Gabaasa, Ibsa June 8, 2020
(Waaqeffannaa, 07/06/2020)-Marii fi Hubannoo Galgala Irreecha Arfaasaa 2020-Ayyaana Irreecha Arfaasaa 2020 akka maatiitti kabajame. Ayyaanni kun akkamitti dabarfame? Miseensotni hawaasa Oromoo Australia Melbourne keessa jiraatan karaa sarara Zoom walitti dhufuun marii gaggeessanii jiru. Marii, Muuxannoo…
Ibsa, Information June 2, 2020
(Waaqeffannaa, 2 Waxabajjii 2020) Ayyaanni Irreecha Arfaasaa baranaa Ardaa Maatiitti akka kabajamu ibsame. Koreen Ayyaana Irreecha Arfaasaa akka ibsetti yeroo kana sababa COVID19 hawaasa bakka tokkotti baasanii ayyaanicha kabajuun hin danda’amne. “Yeroo rakkoon jirutti, waan…